စဉ်းစား စရာလေးများ(၂ )… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Think Different » စဉ်းစား စရာလေးများ(၂ )…	9
စဉ်းစား စရာလေးများ(၂ )…
Posted by Ko out of... on Feb 21, 2012 in Think Different |9comments
ခွဲစတ်ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်နေသည့်လူနာတစ်ဦးအား ဆရာဝန်တစ်ဦးကမေးလေ၏ . . .
ဆရာဝန် ။ ။ ခင်ဗျာရောဂါက ခွဲစိတ်ကုသမှ ရတော့မယ့် အနေအထားဖြစ်နေတယ်။
လူနာ ။ ။ မခွဲစိတ်ရင်ကော မရဘူးလားဒေါက်တာ။
ဆရာဝန် ။ ။ မရဘူး၊ ခွဲစိတ်ကုသနည်းနဲ့မှ ပျောက်ကင်းလိမ့်မယ်။
လူနာ ။ ။ ဒါဆိုလည်း ခွဲစိတ်ပကုသပါ့မယ်။
ဆရာဝန် ။ ။ ကြိုတင်ပြောထားရမယ်။ အခုလိုခွဲစိတ်ကုသမှုမျိုးက ရာနှုန်းပြည့် မသေချုားဘူး။
လူနာ ။ ။ လောလောဆယ် ရောဂါပျောက်ချင်နေပြီ၊ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ခွဲစိတ်လိုက်မယ်ဆရာ။
ဆရာဝန် ။ ။ သေချာဆုံးဖြတ်ပြီးပြီနော်။ ဒါဆိုရင် မခွဲစိတ်ခင် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဘာများ မှာကြားခဲ့ချင်လဲ။
လူနာ။ ။ ခွဲစိတ်ပြီးရင် ဘောင်းဘီတိုလေးတော့ ၀တ်ထားပေးပါနော်. . .
ဆရာဝန် ။ ။ ဟေ.. . . .
ဒီဟာသလေးမှာ…ကျွန်တော်တို့ အတွက် ဘာတွေကို စဉ်းစားစရာ ဖြစ်စေလဲဆိုတော့..
လူနာဟာ..သူသေသွားတဲ့ အခါ.. သူ့အတွက်ဘောင်းဘီတို ၀တ်ပေးဖို့ မှာခဲ့တာ သေသွားပြီးမှတော့ သူ့အတွက် တကယ်ဝတ်ပေး မ၀တ်ပေးဆိုတာ သူတကယ်ဘဲ သိနိုင်ပါ့ မလား…
ဒါကြောင့် သေသွားတဲ့ လူတွေအတွက်ဆိုပြီး အမျိုးမျိုးလုပ်ပေး နေတာတွေလည်း ..သေသွားတဲ့လူ တကယ်ဘဲ ရသွားလား…
ကျွန်တော် အထင်ပေါ့လေ.. ကျွန်တော်တို့ တတွေဟာ သေပြီး ဖြစ်မဖြစ် အတွက် စဉ်းစား ပူပန်ရင်းနဲ့ အလုပ်များပို ရှုပ်နေသလား လို့ …တွေးတောနေမိတော့တယ်…
FattyCat says: အို….အဲဒီကိစ္စများကွယ်…သိပ်မတွေးနဲ့
သူငယ်ချင်းတရုတ်ကလေးတစ်ယောက်အဖိုးဆုံးတုန်းက…တရုတ်အယူနဲ့ ကားတွေ၊ တိုက်တွေ၊ လေယာဉ်ပျံတွေကို မီးရှို့ပြီးထည့်ပေးနေတာကို မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်…
ပြီးတော့မှ အမျိုးတွေ ကျန်ခဲ့တဲ့ အိမ်တစ်လုံးကို လုကြတော့တာပဲ….
Wai Phyoe says: ကိုကြောင်ကြီး၇ယ် ကျွန်တော်တွေက Buddhist တွေပါ။ ဘယ်ပါမလဲဗျာ အဖြေက၇ှင်း၇ှင်းလေးပါ
ကောင်းတာလုပ်၇င် ကောင်းတာပါမှာပေါ့ ပာုတ်ဖူးလား။ ကိုယ်စိုက်တဲ့အပင် ကိုယ်၇ိတ်သိမ်း၇မှာလေ
စပါးစိုက်၇င် ဆန်၇မယ် သ၇က်ပင်စိုက်၇င် သ၇က်သီးစား၇မှာပေါ့ဗျာ………..
kyeemite says: သေသူကိုဖင်တုံးလုံးနဲ့ အမြင်မတော်ထားရင် သေသူတော့ ဘာမှမသိတော့ပေမဲ့
သူ့အမျိုးတွေအတွက်တော့စဉ်းစားစရာပေါ့…ဒါကြောင့် သေပီးမှ အသုဘ တွေ ရက်လည်တွေကို
ထည်ထည်ဝါ၀ါလုပ်ကြတာတွေဟာ…တကယ်တော့ ကျန်ရစ်သူတွေအတွက်သာ ဖစ်ပါဂျောင်း…
etone says: တရုတ်အယူအရတော့ .. မီးရှို့ပေးလျှင် ရတယ်လို့ပြောကြပေမယ့်.. တကယ်ရမရတော့ .. ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ပါဘူး … သက်သက်ဖြုန်းတီးမီးရှို့ပစ်ခြင်းလို့ ကျွန်မက ယူဆပါတယ် … ။ သေတဲ့လူကို .. အ၀တ်စားဝတ်ပေးတာ ..ပစ္စည်းတွေထည့်ပေးတာ .. အပြင် ..ပါးစပ်ထဲ ကြပ်စေ့ထည့်ပေးတာကအစ .. သေတဲ့ လူတွေ တကယ်မရဘူးလို့ ထင်ပါတယ် … ။ မီးသဂြိုလ်တဲ့အချိန် … အကုန်ချွတ်ယူထားတယ်လို့လည်း … ကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်သူတွေပြောခဲ့ဖူးပါတယ် … ။ သေတဲ့လူလည်း တကယ်မရပဲ ဘာလို့ဒီလိုလုပ်နေရတာလဲဆိုတာကတော့ .. ရှင်းပါတယ် … ကျန်ခဲ့တဲ့ လူတွေအတွက် .. စိတ်သက်သာရာရအောင်လို့ပါပဲ … ။ ကျွန်မတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အယူမှာတော့ ..သေပြီးတဲ့အချိန် … လုပ်ပေးနိုင်တာက အမျှဝေတာပါ … ။ ကိုယ်အမျှဝေတာကို …သေတဲ့လူက .. .တခြားဘုံဘ၀ရောက်သွားလို့ မကြားနိုင်တာမျိုးရှိသလို .. ကြားပါလျှက် သာဓုမခေါ်နိုင်တဲ့ ဘ၀တွေရောက်နေတာလည်း ရှိပြန်ရော …။ ဒါကြောင့် … မသေခင်က ကျွေးမွေးပြုစုပြီး တတ်နိုင်သမျှလုပ်ပေးတာက ၊ သေမှ ငိုတာ ၊အမျှပေးတာ.. ၊ ပစ္စည်းတွေထည့်ပေးတာ… လုပ်ပေးတာထက်ပိုပြီး အကျိုးများပါတယ် .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 996
Harumoto says: သေဆုံးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့သူတွေအတွက်
ကျန်ရစ်သူတွေက အမျိုးမျိုး လုပ်ပေးကြတာ
ကိုယ့်ဓလေ့ ကိုယ်ဘာသာ အလျှောက် နည်းစုံပါဘဲ။
ဘာသာအလိုက် အယူအဆ အမျိုးမျိုးကြောင့်
သေဆုံးသူ ရ၏ မရ၏ ဆိုတာ အငြင်းပွါးနေကြဆဲပါ။
သူတို့ အယူအရ စိတ်ထဲရှိတာ အကုန်လုပ်ပေးလိုက်ကြတာဟာ
ကျန်ရစ်သူတွေရဲ့ ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေတဲ့ စ်ိတ်ကို
နှစ်သိမ့် ဖြေဖျောက် ပေးတယ်လို့ထင်တာဘဲ။
ဒါ့ကြောင့် သွားလေသူအတွက် ဒါလေးလုပ်ပေးလိုက်ရတယ် ဆိုပြီး
တချို့ကြတော့လဲ မသေခင် လုပ်မပေးလိုက်ရတဲ့ အလှူ ကို
တွေးပြီး” မလုပ်ပေးလိုက်ရလေချင်း” ဆိုပြီး မဖြေနိုင်တာမျိုးတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။
ဒီအခါမျိုးမှာ ဘာသာရေး အရ အလှူ အတန်းလုပ်ပေးပြီး
အမျှအတန်းဝေ ပေးပြီဆိုရင် သေဆုံးသွားတဲ့သူ ရမရ မသိပေမဲ့
ကျန်ခဲ့တဲ့ ကျန်ရစ်သူတွေကတော့ ကျေနပ်ပြီး နေတတ်သွားကြတာပါ။
ဒါကြောင့် သေပြီးမှ လှူပေးတယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ်လို့…။
မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ says: သေတဲ့လူက ဘာမှမပါသွားနိုင်ပေမယ့် ဦးပေါဦးကြီးက သေသွားမှလက်ချည်းဗလာလုပ်ပြဖို့ ကြိုတင်
စီမံထားပေါ့များ အံ့သြစရာမဟုတ်ပေဘူးလားဗျာ။ဘောင်းဘီလေးတော့ ဝတ်ပေးလိုက်ပါဗျာနို့ မဟုတ်ရင်
sandawchain says: ကျွန်တော့်ကို သာမန်လူဥာဏ်နဲ့လုံးဝမသိတဲ့နေရာခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်ကြောက်ပါတယ် အဲလိုပဲသေပြီးနောက်ရောက်မယ့်နေရာကိုလည်းမသိချင်ပါဘူး
ဘာလို့ ဆိုတော့က ကိုယ်မှမသိတဲ့နေရာကိုပြောနေတာပဲ ကြောက်တာပေါ့ ခုဘာရမလည်း
ဟုတ်တယ်လေ ကိုယ်မှမသိတဲ့နေရာကိုပြောနေတာ ကြောက်စရာကြီး :)))
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 851
Diamond Key says: ကိုအောက်ရေ၊ သူက အဲဒီရက်ပိုင်းမှာ ဟိုမင်းသားလေးများ မြင်ထားသလားလေ …. :P
Ko out of... says: – သေသွားတဲ့လူတွေအတွက် အောင့်မေ့ဖွယ် အခန်းအနားလုပ်ရင် ဒီလူသေသွားပြီ ဘာမှမရှိတော့ဘူး ဘာမှ မကျန်တော့ဘူး ဆိုတာကိုလည်းမလုပ်ပေးကြနဲ့…
– ဒီလူသေသွားလို့ သူဝင်ပူးတယ် သူအသက်ရှင်စဉ် ရှိနေသလိုမျိုးလည်း မလုပ်ပေးကြနဲ့…
– ထိုသူ အသက်ရှင်စဉ် သူ့ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူးတရားတွေ သူသေသွားသော်လည်း ဒီကျေးဇူးတရား၊ အဆုံးအမ၊ အရည် အချင်းတွေ ကျန်ခဲ့လို့ စသည်ဖြင့်အောင့်မေ့ပေးရမယ်။ အရည်အချင်းအလျှောက်အတိုင်း လျှော့ပြီး ပိုပြီး မလုပ်ပေးကြဖို့ပါ….